disable ipv6 on ubuntu 9.04 – box02's little blog
May 23, 2009 by box02
disable ipv6 on ubuntu 9.04
ကျနော်တို့ ဖိုရမ်ထဲမှာ ဒီအကြောင်းတွေဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်၊ ubuntu jaunty မှာ kernel အသစ်ကို install မလုပ်ပဲ ipv6 ကို disable လုပ်လို့မရကြောင်းသိရှိရတယ်။ အဲဒါက ubuntu jaunty kernel v2.6.28 (default kernel) မှာ bug ရှိနေတယ် ယူဆပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ကျနော်တို့ kernel v2.6.29* နဲ့ test လုပ်ကြည့်ပါတယ်။ အဆင်ပြေခဲ့ပါတယ်။ လုပ်နည်းလေးကို အတက်နိုင်ဆုံး တဆင့်ချင်းရေးကြည့်မယ်နော် ..
ပထမဦးဆုံး ကျနော်တို့ kernel ကို download လုပ်ရမှာပါ .. ubuntu kernel ကို download လုပ်ဖို့ repository က အောက်ကလင့်ပါ ..
ကျနော် test လုပ်တဲ့ kernel က v2.6.29 ဆိုတော့ ဒီအောက်ကလင့်မှာပါ ..
ကျနော့် ubuntu က i386 base ဆိုတော့ ကျနော် download ရမယ့် urls တွေကို တစ်ခါတည်း စုပြီး တခါတည်းဆက်တိုက် download လုပ်မှာပါ .. ပထမဆုံး ကျနော် downloaded files တွေထားဖို့အတွက် Folder အသစ်တစ်ခုလုပ်ပြီး nano နဲ့ urls တွေကို တဖိုင်တည်းမှာ စုပြီး wget နဲ့ download လုပ်ပါတယ် ..
Making kernel downlaod urls file with nano
$ mkdir kernel-2.6.29
$ cd kernel-2.6.29
$ nano kernel-2.6.29.txt
kernel download urls file make with nano
အဲဒီဖိုင်လုပ်ပြီးပြီဆိုရင် ကျနော် Terminal ထဲမှာပဲ wget နဲ့ download လုပ်ပါတယ်
Downloading packages with wget in Terminal
$ wget -i kernel-2.6.29.txt
downlond kernel*.deb by wget
ပြီးတော့ ရလာတဲ့ packages တွေကို Terminal ထဲကနေပဲ dpkg နဲ့ install လုပ်ပါတယ် ..
Installing packages with dpkg in Terminal
installing packages by dpkg
install လုပ်တဲ့အခါမှာ grub ကို update လုပ်စဉ်မှာ grub menu list ကို update လုပ်ဖို့မေးလာမှာပါ .. အဲဒီတော့ ကျနော်က manually edit လုပ်ချင်တာနဲ့ “keep the local version currently installed” ကိုရွေးလိုက်ပါတယ် ..
keep my grub menu.lst version
done new kernel 2.6.29 installation
ပြီးတော့ ကျနော် grub menu list ကို manually edit လုပ်ပါတယ် ..
Editing grub/menu.lst manually
$ gksudo gedit /boot/grub/meun.lst
အောက်က နမူနာနဲ့ edit လုပ်ပေးရပါတယ် ..
title Ubuntu 9.04, kernel 2.6.29-020629-generic
kernel /boot/vmlinuz-2.6.29-020629-generic root=UUID=7362f3b7-70ef-4ae6-8c53-54fb13571d0f ro quiet splash ipv6.disable=1
သတိထားရမှာက kernel version ရယ် uuid ရယ် ပြီးတော့ ipv6.disable=1 ရယ်ကိုပါ ..
edit my grub/menu.lst manually
ပြီးရင် grub ကို update လုပ်ပေးရပါမယ် ..
ပြီးရင် reboot လုပ်မယ်၊ system ထဲရောက်ရင် ipv6 က တကယ်ပဲ disable ဖြစ်လားမဖြစ်လား စမ်းစစ်ကြည့်ပါမယ် .. output မထွက်လာဘူးဆိုရင် ဒါဟာ တကယ် disable ဖြစ်တာပါပဲ ..
Checking ipv6 disable or not
$ ipa| grep inet*
check ipv6 disable and kernel version
This entry was posted in Linux, Testing and tagged disable, ipv6, Jaunty, kernel, Ubuntu. Bookmark the permalink.
vnstat on ubuntu 9.04 →
2 thoughts on “disable ipv6 on ubuntu 9.04”
Mark | May 23, 2009 at 11:03 am
box02 | May 23, 2009 at 11:22 am
Thank you Ko Mark 🙂